Wax lacag ah laguama helo! , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Masiixiyiinta badankood ma rumaystaan ​​injiilka - waxay u maleynayaan in badbaadada lagu gaari karo oo keliya haddii qofku ku kasbado iimaan iyo nolol damiir leh. "Wax nolosha ah kama helaysid." "Haddii ay u muuqato mid aad u wanaagsan in ay run noqoto, markaa malaha run maahan." Xaqiiqooyinkaas caanka ah ee nolosha ayaa si isdaba joog ah loogu dhajiyaa midkeen kasta iyada oo loo marayo khibradaha shaqsiyeed. Laakiin farriinta masiixiga waa ka soo horjeeddaa. Injiilku runti wuu ka qurux badan yahay. Waxay bixisaa hadiyad.
Fiqiga fiqi ahaaneed ee Thomas Torrence ayaa sidan u dhigay: “Ciise Masiix wuxuu u dhintay si sax ah inaad tahay dembiile oo gebi ahaanba aadan u qalmin isaga sidaas darteedna adiga ayuu kaa dhigay, xitaa kahor iyo iyadoo aan loo eegin waxaad rumeysan tahay isaga jacaylkiisa aad buu kuugu xidhay jacaylkiisa si uusan kuu sii dayn doonin inuu sii daayo, xitaa haddii aad diido oo aad cadaabta naftaada u dirto, jacaylkiisu waligiis joogsan maayo ". (Dhex-dhexaadinta Masiixa, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, bogga 94).
Runtii, taasi waxay u muuqataa mid aad ufiican. Malaha taasi waa sababta Masiixiyiinta badankood aysan run u rumeysan. Malaha taasi waa sababta Masiixiyiinta badankood u maleeyaan in badbaadadu ay ka timaado oo keliya kuwa ku kasbada iimaan iyo nolol damiir leh.
Si kastaba ha noqotee, Kitaabka Quduuska ah wuxuu sheegayaa in Ilaah mar hore waxwalbo naga siiyay - nimco, xaqnimo, iyo badbaado - xagga Ciise Masiix. Waxba kama qaban karno. Ballan qaadkan buuxa ee annaga, jacaylkan aan la qeexi karin, nimcadan shuruud la’aanta ah, waxaanan xitaa rajo gelin kari weyday in waxan oo dhan aynnu ku kasbano kun qof.
Inteena badan ayaa wali ka fikiraysa in injiilku ugu horrayn yahay hagaajinta dhaqankeena. Waxaan aaminsanahay in Ilaah kaliya jecel yahay kuwa 'toosiya oo toosiya wadada toosan'. Laakiin sida uu Kitaabka Quduuska ah leeyahay, injiilku maahan hagaajinta dhaqanka. 1 Yooxanaa 4,19 wuxuu leeyahay injiilku wuxuu ku saabsan yahay jacayl - ee ma ahan inaan Ilaah jecel nahay, laakiin inuu isagu ina jecel yahay. Waxaan wada ognahay in jacaylka laguma keeni karo xoog ama xoog, ama sharci ama qandaraas. Waxaa la bixin karaa oo loo aqbali karaa ikhtiyaar ahaan. Ilaah wuxuu jecel yahay inuu iyaga siiyo oo wuxuu doonayaa inuu aqbalo si furan, in Masiixu uu inagu dhex nool yahay oo uu awood inoo siiyo inaan jeclaano isaga iyo midkeenba midka kale.
1 Korintos. 1,30 Ciise Masiix waa xaqnimadeenna, quduuskeenna iyo madaxfurashadayada. Caddaalad kuma siin karno. Taa bedelkeed, waxaan aaminsanahay inuu isagu wax walba u yahay nafteenna aan awood ku liidanayn. Maadaama uu isagu hore noo jeclaaday, waxaa laga xoreeyay qalbiyadeena is jecel si aan isaga u jeclaano iyo midkeenba midka kale.
Ilaah wuu ku jeclaa kahor intaanad dhalan xitaa. Isagu wuu idin jecel yahay in kastoo aad dembile tahay. Weligiis ma joojin doono inuu ku jeclaado, xitaa haddii aad ku guuldareysato inaad ku noolaatid dhaqankiisa xaq iyo farxad leh maalin kasta. Taasi waa warka wanaagsan - runta injiilka.
Noloshaada waxba kama helaysid!